‘देश बचाउने हो भने प्रचण्डले नेकपामा विद्रोह गर्नुपर्छ’ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more ‘देश बचाउने हो भने प्रचण्डले नेकपामा विद्रोह गर्नुपर्छ’
‘देश बचाउने हो भने प्रचण्डले नेकपामा विद्रोह गर्नुपर्छ’	एमसीसीमार्फत नेताले कमिसन खाएका छन्
माघ १६ गते, २०७६ - १८:०१
०७५ साल फागुनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । महाधिवेशको प्रतिवेदनमा इन्डो–प्यासेफिक सैन्य रणनीतिमा संलग्नता अपराध र पाँच सय मिलेनियम अमेरिकी डालर बराबरको अनुदान रकम जुन छ, त्यो घुस हो भनेका छौं । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले नीतिगतरुपमा अगाडि बढायौं । ०७६ असारमा हामीले देशभक्त जनक्रान्तिको मार्गचित्रबारे विचार गोष्ठि गर्यौं । त्यहाँ मैंले आइपिएसको अध्यक्षको स्थानमा अमेरिका र उपाध्यक्षको स्थानमा भारत देखिन्छ ।
त्यसैले आइपिएस खारेज गर्नु पर्छ र नेपालको गुमेको भूमि टिष्टा–काँगडा फिर्ता आउनुपर्छ भनेर कार्यपत्र पेश गरें । त्यसमाथि व्यापक छलफल र बहस भयो । त्यसको निष्कर्ष अमेरिकाले अगाडि सारेको आइपिएस र पछिल्लो समय परिमार्जिजरुपमा आएको एमसीसी नेपालको हितमा छैन । यसलाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ ।
रुपमा जे भएपनि सारमा एमसीसी आइपिएसकै अंग हो
अमेरिकी दुताबासले अहिले आएर जेसुकै प्रष्टिकरण दिएपनि पहिले अमेरिकी अधिकारीले एमसीसी आइपिएसकै एक अंग भएको स्वीकारेका छन् । खैर, रुपमा जेसुकै भएपनि सारमा अमेरिकाको सम्पूर्ण गतिविधि सामराज्य विस्तार र रक्षामा केन्द्रिकृत रहेको छ । एसियामा अमेरिकाको अहिले एकमात्र रणनीति भनेको चीनसँग लड्ने हो । उसले नेपाललाई कुटनीति, आर्थिक प्रोलोभन र धम्कीपूर्ण अस्त्र प्रयोग गरेर दुस्चक्रमा फसाउने र नेपालमार्फत चीनलाई ध्वस्त बनाउने रणनीतिमा रहेको छ । त्यसकारण आइपिएस वा एमसीसी जे भनेपनि यसलाई अनुमोदन गर्यो भने नेपाल अर्को अफगानस्तान बन्छ । यसको सबै मिलेर विरोध गर्नु पर्छ ।
एमसीसीको पक्षमा जतिसुकै पक्षपोषण गरेपनि यो आइपिएसकै अंग हो । यसलाई स्वीकार्नु भनेको अर्को असमान सुगौली संन्धि नेपालले ब्यहोर्नु हो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली संन्धिले तीन वटा खराबी गर्यो ।
पहिलो यस संन्धिले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठीत गर्यो । दोस्रो निश्चित समुदायका नेपाली युवाहरुलाई विदेशी सेनामा लखेट्यो । अर्को पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभाग अंग्रेजलाई सुम्पियो । अब जति बचेको छ, आइपिएस मार्फत एमसीसीको नाममा नेपाललाई समाप्त पार्ने हो । त्यसो हुनाले यो राष्ट्रिय गद्दारीको काम हो । केहि नेताहरु यसमा लेन्डुप दोर्जे बन्दैछन् ।
साम्राज्यवादी अमेरिकाले एमसीसी माफर्त नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको हकलाई अमेरिकाको अधिकार कायम गर्ने र नेपालको संसदबाट एमसीसीलाई अनुमोदन गरी सम्पूर्ण कानून निष्कृय बनाउने गोटी चालेको छ । एमसीसी अनुमोदन भएपछि हामीले नेपाली भएर सोच्न पाउने छैनौं । अमेरिकाको अण्डरमा काम नभए कारवाही गर्ने छ । नेपालमा अमेरिकी कानून सर्वमान्य हुने छ । र अन्य जेजति काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा भारतको अनुमति लिनुपर्ने छ । एमसीसीमार्फत नेपाललाई अमेरिका र भारतको प्रत्यक्ष उपनिवेश बनाउने अपराध भइराखेको छ ।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए नेपालले धेरै क्षति ब्यहोर्नुपर्छ
नेपालको सत्ताधारी नेताहरुले लेण्डुप दोर्जे प्रवृत्ति बनेर चुनाव जित्ने र देश बेच्ने हो । हाम्रा देशका शासक, नेताहरुले यति निर्लज्ज ढंगले विदेशीको दलाली गर्ने र देश वेच्ने अपराध गर्छन भन्ने सोचिएको थिएन ।
भर्खरै मात्र नेपाल–चीनबीचको सुपुर्दुकी संन्धि खारेज सम्बन्धमा एक पत्रिकामा आएको समचारले नेपालमाथि अमेरिकी सामराज्यबादको नाङगो हस्तक्षेप प्रष्ट हुन्छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी सांसदले धम्किपूर्ण पत्र पठाएपछि असोज २० गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको सुपुर्दुकी सन्धि असोज २४ गते बदर गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसीको पक्षमा सरकारमा रहेको डबल नेकपा, नेपाली काँग्रेसले छाँद हाल्नुको अर्थ के हो ? एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए नेपालमा लाखौं मानवीय क्षति र अर्बौ भौतिक क्षति हुन जान्छ । एमसीसी भनेको नेपालमा अमेरिकाको सैन्य शिविर खडा गर्ने प्रारम्भिक तयारी हो । त्यसकारण देशको रक्षाको लागि देशभक्त नेपाली जुट्नुपर्छ ।
एमसीसीमार्फत नेताले कमिसन खाएका छन्
नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा मौन बस्नुले ओली सरकार अमेरिकी सामराज्यको कठपुतली भएको प्रमाणित भएको छ । एमसीसीमा देउवाले काँध हाल्नुपर्ने, प्रचण्ड बोल्न नपर्ने, ओली तर्सिनु पर्ने स्थिति हेर्दा ५५ अर्ब रुपयाँमा यिनीहरुले मिलेर आधा रकम झ्वाम पारिसकेको जस्तो देखिन्छ । यिनीहरुले अमेरिकासँग थैलो थापेर कमिसन बाँडिचुँडि खाइसकेको हुन सक्छ । र, मालिकप्रति बफादारी जायर गर्नलाई केन्द्रीय कमिटिबाट अनुमोदन गर्न नेकपाले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेको हुन सक्छ ।
यसबारे नेकपाको केन्द्रीय सदस्यहरुले विरोध गरेको हामीले सुनेका छौं । प्रतिरोध उहाँहरुले गर्नुपर्छ । अब अमेरिका र भारतसँग बफादर राख्ने मालिकप्रति देशभक्त नेता, कार्यकर्ता र नागरिकहरु सडकमा आउनुपर्छ । देशप्रतिको गद्दारी विरुद्ध उभिन म नेकपाका देशभक्त र इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरुलाई आव्हान गर्दछु ।
देशको रक्षा गर्न नेपालले भियतनामबाट सिक्नुपर्छ
अमेरिकी सामराज्यवादी युद्धको दुस्चक्रमा नेपाललाई फसाउँदै छ । नेपालमार्फत अमेरिकाले चीनमा कति क्षति पुर्याउन सक्छ त्यो अमेरिका र भारतले अनुमान गर्न सक्दैन । जहाँसम्म लाग्छ चीन पूर्व तयारीको साथ मजबुदरुपले बसेको हुनाले त्यति क्षति पुर्याउन सक्दैन । तर, त्यसको ठुलो असर नेपालमा पर्छ । अहिले अमेरिकी सेना जुनजुन देशमा कब्जा जमाएर बसेका छन् त्यहाँ फिर्ता भएका छैन ।
भियतनाममा मात्र अमेरिकी सेनालाई लखेटिएको छ । त्यसकारण देशभक्त नेपालीले भियतनामाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । एकाइसौं शताब्दीको भियतनाम नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा म बिस्वस्थ छु । नेपाली जनता देश भक्त छन् । आजसम्म स्वतन्त्र नेपालको स्वाभिमानी नेपाली भइआएका छन् । देशको रक्षाकोलागि देश द्रोही गद्दारी लेण्डुप दोर्जेविरुद्ध स्वाभिमानी नेपाली सडकमा आउनेमा म विस्वस्त छु ।
कम्युनिष्ट भनेको देशभक्त हुन्छ, देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ । अहिले डबल नेकपा नाममात्रको कम्युनिष्ट हो । कुनै पूर्वाग्रह नराखि भन्नुपर्दा ओली सरकारको कार्यकालमा राम्रो भएको भनेको १३ औं साफ खेलकुद बाहेक अन्य कुनै राम्रो काम गरेको छैन । यी त कम्युनिष्टको खोल ओडेर समाराज्यवादी र विस्तारवादीका सुराकी गर्न बसेका जस्तो लागेको छ । मालिकलाई खुशी पार्न कम्युनिष्को खोल ओडेर बिप्लबमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । कम्युनिष्टले कम्युनिष्टलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गरिदैन । नमिलेको कुरा छलफलबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर किन त्यासो गरिएन ?
माओवादीलाई प्रचण्डले एमालेमा विलय गराए
अहिलेको अवस्थामा एमाले माओवादीमा मिसिएर डबल नेकपा बनेको हो कि वा माओवादी एमालेमा मिसिएर बनेको हो भन्नेमा धेरैलाई कन्फ्ज रहेको छ । त्यसैले प्रचण्ड एमाले बनेर नेकपा बनेको हुनाले हामी प्रचण्डसँग सति गएनौं । कारण के थियो भने जतिबेला म माओवादीमा थिइन । ०४८ सालमा पार्टीको छैटौं महाधिवेशन हुँदा महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा माओवाद ग्रहण नगरी कोहि पनि सच्चा कम्युनिष्ट बन्न सकिदैन । त्यहि भनेर हामी जनयुद्धमा होमियौं ।
पछिल्लो समय उहाँ माओवाद नमानिकन पनि कम्युनिष्ट बन्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा कुनै छलफल समिक्षा नगरी एमालेमा हामफाल्नुभयो । प्रचण्ड, बादलसहितको माओवादीले देश र जनताको हितको लागि वकालत गरेको भए अहिले ओली र देउवाले पेल्न सक्ने थिएन । प्रचण्डले एमालेको भाँडामा माओवादीलाई हाल्दिने काम गरिसकेपछि नेकपामा प्रचण्डले भनेको जस्तो सजिलो छैन । त्यसकारण नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीबारे कुनै उल्लेख भएन । प्रचण्डले छोडेपनि देशभक्त जनताले छोड्दैनन् । तर, बहुदलबादी, गणतन्त्रवादीले देश बेचेको हुनाले अर्कैले फाइदा उठाउन सक्छ ।
देशमा फेरी प्रतिगमनको खतरा रहेको छ । यसमा हामीले होस राख्नु पर्छ । अब मुख्यरुपले हामीले भियतनामको अध्ययन गर्नुपर्छ । नयाँ शताब्दीको भियतनाम नेपाललाई बनाउनुपर्छ । यसको नेतृत्व पुर्नगठित नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्छ । हाम्रो ध्यान यस तर्फ गएको छ । अन्ततः देशभक्तहरुको जित हुन्छ । यी लेण्डुप दोर्जेहरुलाई चिहानमा गाडेर छोडिन्छ ।
देश बचाउने हो भने प्रचण्डले नेकपामा विद्रोह गर्नुपर्छ
म वैचारीक चिन्तनमा विश्वास गर्ने एउटा कार्यकर्ता भएको हुनाले एक समय म प्रचण्डको प्रक्षपोषणमा लडेको हुँ । उहाँले जनयुद्धदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण नगरुजेल देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेका हुन् । वैचारीक राजनीतिको आधारमा मैले त्यसो गर्नु मेरो कर्तव्य थियो । त्यहाँ मैले कुनै किचेन क्याविनेटको आधारमा भागबन्डा गरेर खाने हिसाबले त्यसो गरेको होइन । अहिले पनि केहि बिग्रिएको छैन ।
देश र जनताको पक्षमा उभिने हो भने पहिले प्रचण्डले नेकपामा विद्रोह गर्नु पर्छ । आइपिएस र एमसीसी उहाँले खारेज गर्नुपर्छ । लिम्पियाधुरा लगायत जुन भारतबाट नेपाली भूमि हडपेको छ त्यो फिर्ता गर्ने र नेपालको सीमाना सुरक्षा गर्न उहाँले संघर्ष गर्नुपर्छ । अर्को कुरा माक्सवाद, लेलिनवाद र माओवाद फेरी स्वीकार गर्न प्रचण्ड तयार हुनुभयो र गल्ति गरियो भनेर आत्माआलोचना गर्नुभयो भने देश हामीले बचाउन सक्छौं ।
(लेख नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँतीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित रहेर तयार गरिएकाे हाे ।)
माघ १६ गते, २०७६ - १८:०१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । विश्वभर हालसम्म करिब १३ लाख मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छन् । कोरोना भाइरसकै कारण हालसम्म...
काठमाडौं । नेकपा शीर्ष नेताहरुको निरन्तर दबाबपछि पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले...
प्रचण्ड एक विश्व क्रान्तिकै यूग पूरूष हून , स्यालहरुको चिच्याहटमा सिंह गर्जिनुपर्दैन